YEYINTNGE(CANADA): Friday, July 08
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/08/20110အကြံပြုခြင်း
ပုဂံဒေသ အင်ကြင်းတောရသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက် လည်ပတ်စဉ်
Let me say what I see 101..pdf
Let me say what I see 101..doc
မြန်မာပြည်သား တရုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများ ခင်ဗျား
မြန်မာပြည်ဖွား မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်လျှက်နှင့် ကိုယ့်နိုင်ငံအကျိုးကိုအတွက် တရုပ်ကို ဝေဖန်ရင် ကာယကံရှင် တရုပ်တွေထက်တောင် ဆတ်ဆတ်မခံတတ်သူတွေ၊ ကာယကံရှင် တရုပ်တွေထက်ပင် အကွက်စေ့စေ့ ကာကွယ်လျှောက်လွှဲပေးတတ်သူတွေကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ (တရုပ်ဆန့်ကျင်ရေး စာမဟုတ်။ တာဝန်မဲ့၊ သိက္ခာမဲ့သော တရုပ်ကိုယ်ကျိုးရှာဝါဒ ဆန့်ကျင်ရေးသာဖြစ်ပါတယ်။)
မြန်မာပြည်သား တရုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေ ပြောလေ့ပြောထရှိတာက နိုင်ငံတိုင်းဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံအကျိုးကို ဦးစားပေး ကြည့်တတ်တာမို့ တရုပ်ကလည်း အနောက်နိုင်ငံတွေနည်းတူ ကိုယ့်နိုင်ငံအကျိုးကို အဓိကထားရတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ မှန်သင့်သလောက် မှန်ပါတယ်။
သို့သော် အနောက်နိုင်ငံတွေက ရူးလို့ သူတို့အကျိုးကို အထိခိုက်ခံပြီး စီးပွါးရေး ပိတ်ဆို့မှုတွေကို လုပ်နေကြတာလား။ တရုပ်လိုဘဲ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရောဆိုပြီး ကိုယ်ကျိုးလိုက်ကြတမ်းဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးကို ပြန်ထိခိုက်စေတဲ့ စီးပွါးရေး ပိတ်ဆို့မှုကို ဘာကြောင့် အနာခံလုပ်နေသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေဖို့လိုပါတယ်။ အနောက်ရေနံကုမ္ပဏီကြီးတွေ ရှိနေတုန်းဘဲ ဘာဘဲ ညာဘဲနဲ့ ပြောတာလောက်နဲ့တင် မလုံလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို သိမ်းပိုက်ထားပြီးသလို လွှမ်းမိုးချယ်လှယ်နေတာက အနောက်နိုင်ငံတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ တရုပ်နိုင်ငံပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ အခုဆောင်းပါးကို ရေးဖြစ်ရတဲ့ မူလအကြောင်းတရား ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာဖြစ်လျှက်နှင့် တရုပ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အမျိုးသမီးထက်ပိုပြီး လက်စောင်းထက်နေတဲ့သူများ အထူးသတိထားစေရန် ထောက်ပြခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
“တရုပ်က တရားဝင် အစိုးရကို အထူးအလေးထားတယ်။ ဘယ်သူတက်တက် တက်တဲ့အစိုးရနှင့်ဘဲ အဆင်ပြေအောင် ဆက်ဆံတယ်။ အနောက်နိုင်ငံတွေလို သူများပြည်တွင်းရေးကို ဝင်မစွက်တတ်ဘူး။ အတိုက်အခံဆိုတာက တရားဝင် အစိုးရ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်သိက္ခာ ကိုယ်စောင့်ထိမ်းတတ်တဲ့ တရုပ်က ဘယ်တော့မှ ဆက်ဆံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။”
ဒါကတော့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီး ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာနှိုက်နေတဲ့ စစ်အစိုးရကိုတော့ ထောက်ခံအားပေးနေပြီး လူထုဘက်ကရပ်တဲ့ အတိုက်အခံတွေကို အဆက်အဆံပင် မလုပ်တဲ့ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရုပ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ပြောခွင့်ရ အမျိုးသမီးက ရှင်းပြနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တရုပ်အကျိုးစီးပွါးကို မြန်မာပြည်သူတွေ အကျိုးစီးပွါးထက်တောင် ပိုစိုးရိမ်နေဟန်ရှိတဲ့ မြန်မာပြည်သား(တရုပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ)တစ်ဦးရဲ့ အင်တာဗျူးတိုင်းလိုလိုမှာ ဖန်တရာတေအောင် မြွက်ခြွေနေကျ အပ်ကြောင်းထပ် တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ အခုလစ်ဗျားမှာ ကုလအသိအမှတ်ပြုဆဲသာမက မိမိကိုယ်တိုင် အသိအမှတ်ပြုဆဲလည်းဖြစ်တဲ့ တရားဝင် ကဒါဖီအစိုးရကြီး ရှိနေလျှက်နှင့် အတိုက်အခံတွေကို တရုပ်အစိုးရက သူများနိုင်ငံထဲ တရားမဝင် ခိုးဝင်ပြီး လာတွေ့တာ နှစ်ခါရှိပြီဆိုသောသတင်းကို အောက်ပိုင်းမှာ ပူးတွဲဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဒီအတိုင်းသာဆိုရင် တရုပ်ရဲ့ အနေအထားက အပြောတစ်မျိုး အလုပ်တစ်မျိုးနဲ့ ပုတီးတစ်ကိုင်ကိုင်၊ အနိစ္စတဖွဖွ ရွတ်နေတဲ့ကြားက (ကန်တော့ပါရဲ့) လင်ငယ်နေနေတာကို လက်ပူးလက်ကြပ် မိလိုက်သလို ဖြစ်မနေဘူးလားဗျာ။
နိုင်ငံတိုင်းဟာ မိမိနိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွါးကို အဓိက ဦးထိပ်ထားတာ မှန်ပါတယ်။ သို့သော် ဒီလိုဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ အနည်းဆုံးနှင့် စည်းအပျက်ဆုံးကတော့ ကွန်မြူနစ်စနစ်က အာဏာရှင်ဝါဒနှင့် အရင်းရှင်စနစ်က အရင်းဝါဒကို မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် အကွက်ကျကျ ရွေးချယ် ပေါင်းစပ်ကျင့်သုံးရင်း ဆွေစဉ်မျိုးဆက် အချမ်းသာကြီး ချမ်းသာနေကြတဲ့ (ကွန်မြူနစ်စနစ်ကို ရိုးသားစွာ ယုံကြည်သူများ၏ လေးစားခြင်းကို မည်သို့မှ မခံထိုက်သော) ကွန်မြူနစ်ပျက် တရုပ်အာဏာရှင် လူလည်ကြီးတစ်စုသာ ဖြစ်ကြောင်းပါဗျာ။
မြန်မာပြည်သူများနှင့် တရုပ်ပြည်သူများ လွတ်မြောက်ကြပါစေ။
ဂျူလိုင်လ ၇၊ ၂၀၁၁
By Michael Martina | Reuters – 29 mins ago
(Reporting by Michael Martina; Additional reporting by Ben Blanchard and Sabrina Mao; Editing by Sanjeev Miglani)
Information Release of Canadian Friends of Burma – July 8, 2011
“Mr Ron Hoffmann, the newly-accredited Ambassador of Canada to the Republic of the Union of Myanmar presented his credentials to U Thein Sein, President of the Republic of the Union of Myanmar, at President Office, here at 11 am today [July 5],” reported in the newspaper, along with the following picture:
However, soon after his credentials were accepted, Burmese Ambassador Kyaw Tin is eager to start an information war on Burma with the Canadian Friends of Burma. He said to the Embassy Magazine,aCanadian foreign affairs weekly, that he would counter information presented by organization like Canadian Friends of Burma.
8 July 2011 Yeyintnge's Diary.doc
1201K View Download
8 July 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
1718K View Download
8 July 2011 Yeyintnge's Diary
“တရားသော ခုခံကာကွယ်မှု၊ တရားသော စစ်ဖြင့်သာ”
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကို နားထောင်ရ၊ ဖတ်ရ၊ ကြည့်ခွင့်ရတဲ့အခါတိုင်း ခံစားရတဲ့ခံစားမှုဟာ တစ ထက်တစ ပိုပြီးဆိုးဝါးလာသာရှိပြီးခံစားမှု ကောင်းမွန်ပြေလျှော့လာတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောရပါမယ်။ အဓိကကတော့ စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ ပြည်သူလူထုပေါ်မှာ ဆက်ဆံပြုမူပုံတွေ ကြောင့်လို့ပြောရင် မမှားနိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေး၊ စီး ပွားရေး၊ လူမှုရေးဘယ်နေရာမှာမှ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာကို မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ တစထက်တစ ပိုပြီးဆိုးဝါးပျက်စီး ဆုတ်ယုတ်လာတာတွေကိုသာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးရဲ့ စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုနဲ့ တန်ဘိုးဖြတ်သတ်မှတ် မှုတွေအရ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင် အစိုးရရဲ့ ၀န်ကြီးဆိုသူ ဗိုလ်ချုပ်တွေ၊ ဗိုလ်ဟောင်းတွေက တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ ပြည်တွင်းအသားတင် ထုတ်လုပ်မှုတန်ဘိုးက ဘယ်လောက်။ ပြည်ပပို့ကုန်တန်ဘိုးက ဘယ်လောက်တိုးတက်များပြားလာနေကြောင်း တွေမ စားရ ၀ခမန်းအရှက်မရှိပြောနေတာတွေကို တကယ်တန်းခံစားနေကြရတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေက ပါစပ်အဟောင်းသား နဲ့ ကြည့်နေ၊ နားထောင်နေကြရတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အဓမ္မအုပ်ချုပ်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင် တွေအကြောင်းမသိတဲ့ တချို့နိုင်ငံတွေကတော့ အော်ဟုတ်ရှာမှာပဲလို့ ထင်ကြရအောင် စစ်အစိုးရက စနစ်တကျ လိမ် လည်နေတာကို သိတဲ့နိုင်ငံတွေက အနည်းအကျဉ်းပဲရှိတာပါ။
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေက တခြားတိုင်းပြည်တွေကို နိုင်ငံရေးအရ စီးပွားရေးအရ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျဖို့ သူတို့ရဲ့ အ ခြေအနေအရ၊ နိုင်ငံတကာရဲ့အခြေအနေအရ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အ ဓိက အာရုံစိုက်တာက ဒီလောက်သဘာဝသယံဇာတပေါကြွယ်ဝတဲ့ နိုင်ငံ၊ လူဦးရေနဲ့ နေရာအကျယ်အ၀န်း နိုင်ငံပိုင် နက်အရ အနေအထား အချိုးအစားကောင်းမွန်တဲ့ နိုင်ငံမှာ အာဏာရယူ ထင်သလိုအုပ်ချုပ်၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ပြည်သူလူထုကို သူတို့အတွက်အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ ကျေးကျွန်တွေလို အမိန့်ပေးစေခိုင်းနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါ တယ်။ ပြည်သူလူထုတွေက အဲဒီလိုလုပ်နေတဲ့ သူတို့ရဲ့ပက်စက်တဲ့အကြံကို သိမြင်နားလည်လာ၊ အာခံဆန့်ကျင်လာ တာမျိုး မဖြစ်ရအောင် တိုင်းပြည်ရဲ့ ပညာရေးစနစ်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပညာမတတ်တဲ့အ တွက် အတွေးအခေါ် အသိအမြင်တွေ ချို့ယွင်းအားနည်းလာ၊ စိတ်ဓာတ်တွေပျက်စီးလာတဲ့ ပြည်သူလူထုမျိုးကို သူတို့ အလွယ်တကူအုပ်ချုပ်လို့ရမယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသိထားကြတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက နည်းလမ်းအမျိုးနဲ့ ပညာ ရေးကိုဖျက်ဆီး၊ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ကမ္ဘာပြန့်ဖြစ်စဉ်အရ စီးဝင်လာတဲ့ သတင်းတွေ၊ နည်းပညာတွေနဲ့ ကင်းကွာနေအောင် သုံးစွဲဖို့အခွင့်အလမ်းမရအောင် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကို အာဏာနဲ့ ပိတ်ပင်တားဆီးထားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ စွမ်းအစနဲ့ တားမရအောင်နည်းပညာမြင့်မားတဲ့ သတင်းရင်းမြစ်ကုမ္မဏီကြီးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်သာ သိမီသုံးစွဲနိုင် သူအနည်းအကျဉ်း ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ရပ်ကို စစ်အာဏာရှင်တွေက မဟာဗျူဟာတရပ်ချမှတ်ပြီး အသေအ ချာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထောက်လှန်းရေးယန္ဒယားကြီးကို အားကောင်းခိုင်မာ အောင် တည်ဆောက်ပြီး အခြေခံပြည်သူလူထု ကြီးရဲ့ အခြေအနေ၊ စရိုက်လက္ခဏာသဘာဝ၊ တွေးခေါ်စဉ်းစားပုံ၊ ဘာသာတရားကိုယ်းကွယ်ယုံကြည်မှု၊ ပြင်းထန်မှု မပြင်းထန်မှု တွေကို စနစ်တကျ သုတေသနလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ စစ်မဟာဗျူဟာလေ့လာရေးဌာန ကြီးဖွင့်ပြီး လုပ်ခဲ့တာပါ။
ပြီးမှစစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်ဘယ်လိုပြည်သူလူထုကိုကိုင်တွယ်ရမယ်။ကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်။တော်လှန်တိုးတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်။အလုပ်သမားနဲ့လယ်သမားတွေကိုဘယ်လိုထိမ်းချုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့မဟာဗျူဟာ၊နည်းဗျူဟာတွေကိုရေးဆွဲချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာခံဆန့်ကျင်အားပြိုင်လာမှုလုပ်လာရင်ဘယ်အဆင့်မှာဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ထိမ်းချုပ်ရမယ်။ဒီမိုကရေစီရေး လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေ အင်အားစုတွေကို ဘယ်လိုကိုင် တွယ် ထိမ်းချုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရေးဆွဲထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်၊ အာဏာ၊ ငွေကြေး တွေကို ဘုံးဘောလအောသုံးစွဲပြီး သူ့ရဲ့ဒေါက်တိုင် စစ်တပ်၊ ရဲနဲ့ အကျဉ်းထောင်တွေကို တောင့်တင်းခိုင်မာအောင် လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။
နောက်တခါ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ အရေးကြီးတဲ့နည်းကတော့ မက်လုံးပေးသိမ်းသွင်းခြင်း၊ သွေးခွဲ ခြင်းနဲ့ မလှန်နိုင်အောင် ခြေမှုန်းပစ်ခြင်း ပါပဲ။ ပြည်သူလူထုကို ထမင်းနှစ်နပ်အတွက် အချိန်ပြည့် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားပြီး ပူပင်သောက အမြဲဖြစ်နေရအောင် ဆင်းရဲမွဲတေခြင်းထဲမှာ နစ်နေအောင်လုပ်ထားပြီး၊လူ့အခွင့်အရေး နိုင်ငံရေးဆိုတာ တွေကို နားမလည်အောင်အထိ ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေးအရ အတန်အသင့်နေနိုင်စားနိုင်သူတွေနဲ့ ရေပေါ်ဆီ အထက်လွှာတွေ၊ သူတို့တွေရဲ့သားသမီးတွေကို အကျင့်ပျက် စရိုက်ပျက်နည်းနဲ့ အပျော်ရှာရင်းသာ အချိန်ကုန်အောင် လမ်းလွှဲဟထားပေးလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမဟုတ်ရင် ဥပဒေကို အသုံးမချ အရေးမယူဘဲ လွှတ်ပေးထားလိုက်ပါ တယ်။ လောင်းကစား၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ကာမဂုဏ်အာရုံတွေဘက်ကို လမ်းဖွင့်ဟထားပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကိုရည်ရွယ် ချက်ရှိရှိ လုပ်ခဲ့တာပါ။ တဘက်ကလည်း နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီဆိုတာနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဘ၀ပျက်တဲ့ထိ အရေးယူ အပြစ်ပေးတတ်တဲ့အတွက် လူတွေဟာနိုင်ငံရေးဆိုရင် နားမထောင်ရဲ၊ မပြောရဲ၊ မဝေဖန်ရဲဖြစ်လာကြပြီး နိုင်ငံရေးနဲ့ ကင်းကွာသထက်ကင်းကွာတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
အရပ်ဘက် နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း အလုပ်ဖြုတ်မယ် အရေးယူ အပြစ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုတွေနဲ့ ပေးတာ ယူ ခိုင်းတာလုပ် ခံမပြောနဲ့ဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်အောင် ပြားပြားဝပ်နေရအောင် လုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ သူတို့ကို ကပ်ဖားရပ်ဖားလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာလိုသူတွေကို ရွေးထုတ် အရိုးအရင်းကိုက်ခွင့်ပေးပြီး လက်ကိုင်ဒုတ်တွေ၊ ကျော်ရိုးတွေ မွေးယူတဲ့အလုပ်ကို စနစ်တကျလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရလဒ်ကတော့ ပြည်သူတွေကြားမှာ ဘယ်သူ့ဘယ်သူကို မှ မယုံရဲအောင် ဖြစ်လာပြီး သူတို့လိုချင်တဲ့ငြိမ်၊ ၀ပ်၊ ပိပြားရေး ဆိုတာကို ခိုင်မြဲအောင် လုပ်လာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူ တို့က လက်နက်၊ အာဏာနဲ့ ငွေကြေးအရ အမြဲအသာစီးရယူထားနိုင်တဲ့အတွက် အောင်မြင်မှုလည်းရခဲ့ပါတယ်။
နောက်မျိုးဆက်တွေကို အတိတ်သမိုင်းအမှန်ကို ဘာမှမသိတော့ပဲ သူတို့စစ်တပ် အုပ်ချုပ်ရေးကို မေးခွန်းမထုတ်ဘဲ လက်ခံပြီး သူတို့ကို တိုင်းပြည်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေအဖြစ် တွေးထင်ယုံကြည်လာအောင် လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ ရေ ရှည်ရည်မှန်း ချက်ကိုလည်း မေ့မထားခဲ့ဘဲ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို ဖုံးကွယ်ပြီးသူတို့လိုချက်တဲ့ သမိုင်းမှားတွေကိုပဲ ချပေးသင်ကြား စေခဲ့တဲ့အတွက် နှစ်ပေါင်းကြာလာတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီသမိုင်းအမှားကြီးကိုပဲ ပြည်သူလူထုက အမှန်လို့ ထင်လာခဲ့ကြပါ တယ်။ သမိုင်းဟာ အောင်နိုင်သူတွေသာရေးတာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားနဲ့ သမိုင်းတခုကို ပုံပျက်ကန်းပျက်ဖြစ် အောင်လုပ်ချင်တယ် ကိုယ်ယုံကြည်စေချင်သလို ရေးသာချလိုက်ပါဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားကို ကောင်းကောင်းအသုံးချခဲ့ ကြပါတယ်။
ပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်ဟာ သူတို့ရဲ့ စစ်အာဏာရှင်တည်မြဲရေးနဲ့ စစ်တပ်လူတန်းစား သစ်မွေးမြူပြီး တိုင်းပြည်ကို ထာဝရ အုပ်ချုပ် ထင်သလိုချယ်လှယ်ပြုကျင့်နိုင်အောင် စနစ်တကျ စစ်ပွဲကြီးတပွဲတိုက် သလို ရေတို ရေရှည် မဟာဗျူဟာနည်းဗျူဟာတွေ ချမှတ်ပြီးလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ တခါတရံမှာ အတွင်း အကြောင်းတရားနဲ့ ပြင်ပအကြောင်းတရား တချို့တွေကြောင့် သူတို့တွက်ဆထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတာတွေနဲ့ ကြုံ တဲ့အခါတွေမှာတော့ မီးစင်ကြည့်ကတဲ့ နည်းဗျူဟာကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်စောမောင် ပြောခဲ့တဲ့ ရန်သူရှာပစ်ခတ် ခြင်း (Searching fire) ကို တွင်တွင်သုံးပြီးပစ်မှတ်ရှာ ခြေမှုန်းပစ်ခဲ့ပါတယ်။
အိမ်နီးခြင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသတွင်းအဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ အာဆီယံ အဖွဲ့ကြီးကိုတော့ မက်လုံးပေးသိမ်းသွင်းတဲ့နည်းလိမ်လည် လှည့်စားတဲ့နည်းတွေနဲ့ ထိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီးရဲ့ အခြေအနေတွေ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နယ်နိမိတ်တွေကိုလည်း အကျအန သိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် မလုပ်မနေရ မလုပ်ရင် မလိုက်နာရင် အရေး ယူ အပြစ်ပေးခံရမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုး (Binding Resolution) ချမှတ်မလာနိုင်သေးသမျှ နေသာသမျှ လေညာ က လုပ်နေခဲ့တာလည်း ခုချိန်ထိပါပဲ။ ဒါကိုတော့ ခုချိန်မှာ အတော်အတန် လေ့လာဖူးသူတွေကအစ သိနေခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရ ဘယ်လောက်ထိရက်စက် ယုတ်မာတယ်။ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲတယ်၊ ဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းတယ် ဆို တာကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံက သာမန်ပြည်သူလူထုကြီးလောက် သိတဲ့သူမရှိတော့ပါဘူး။
ခုစစ်အစိုးရဲ့ပထမဆုံး လူသတ်ပွဲ(ကျောင်းသား) ဖြစ်တဲ့ ၇.၇.၆၂ ဟာ ၄၉ နှစ် တင်းတင်းပြည့်ခဲပါပြီး တနည်အားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကျရောက်ခဲ့ရတာ ရာစုနှစ်ဝက်ပြည့်ဖို့ တနှစ်ပဲလိုပါတော့တယ်။ ဒီအချိန်မှာ တော့ လူလည်လူလိမ် စစ်အာဏာရှင်တွေက သူတို့သုံးလို့ရတဲ့ ဖိနှိပ်ရေးနည်းလမ်းပေါင်းစုံကိုသုံးပြီး မသိနားမလည် ခြင်း အမှောင်တိုက်ထဲရောက်နေကြတဲ့ သာမန်လက်လုပ်လက်စား ဆင်းရဲသား ပြည်သူလူထုကြီးနဲ့ ကမ္ဘာကိုလိမ် လည် တရားဝင်အရေခွံလဲ စစ်စိုးရအဖြစ်ပြောင်းလဲပြလိုက်ပြန်ပါပြီ။ ရည်ရွယ်ချက်ကတောာ့ မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်အာ ဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ ထာဝရ ကျွန်ပြုထားရှိရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ရဲ့ ပြည်သူလူထုကို ဦးဆောင်မှုပေးနေတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ ခေါင်းဆောင်ကြီးငယ်တွေအနေနဲ့ စစ်အစိုး ရကို ငါတို့အမျိုးသားအစိုးရပဲလေဆိုပြီး လျှော့မတွက်မိဖို့၊ သာသာထိုးထိုး မစဉ်းစားမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ စစ်အစိုးရ ဟာ ပြုပြင်လို့မရအောင်ကန်းကုန်နေတဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့ အာဏာရှင်အစိုးရ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူလူထုကို စေတာနာလုံးဝမရှိတဲ့ အစိုးရတရပ်ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ရန်သူအဖြစ် ပြတ်ပြတ်သားသား သဘောထားပြီး သုံးစွဲလို့ရနိုင်သမျှ တော်လှန်ရေးနည်းနာမှန်သမျှ သုံးစွဲပြီး အမြန်ဆုံးနိုဂုံးချုပ်အမြစ်ဖြတ်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားကြရအောင်ပါ။ ပြည်သူလူထုရဲ့ပေါင်းစည်းမှုအင်အားနဲ့ ပြည်သူ့စစ်ကို ဘယ်လိုအာဏာရှင်အစိုးရမျိုးမှ မခံနိုင်ပါဘူး။ ပြည်သူ့စစ် ဖြစ် လာဖို့ ကြိုးစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ။
(ဒီဆောင်းပါးနဲ့ ၇.၇.၆၂ နေ့မှာ စစ်အာဏာာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့၊ ဘ၀နဲ့ရင်းခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားအာဇာနည်တွေကို ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။)
တပ်မ (၇၇) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းတွေက တောင်ငူ အခြေစိုက် တိုင်းမှူးနဲ့ နေပြည်တော် အထိ အကျိုးအကြောင်း တင်ပြခဲ့ပေမယ့် အထက် အဆင့်ဆင့်က တပ်တွင်း စားဝတ်နေရေး ဖူလုံအောင် ဖြေရှင်းပေးခြင်း မရှိသေးဘူးလို့အဲဒီတပ်က တပ်ကြပ်ကြီးတဦးက အာရ်အက်ဖ်အေကို ပြောပြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းက တပ်မတော် အတွင်း အခြေခံ လစာတွေ တိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရရှိတဲ့ လစာအပေါ် ဖြတ်တောက်တာတွေ များတာ၊ တပ်တွင်း ရိက္ခာ အခြေခံ ရိက္ခာတွေကို လျှော့ချတာတွေ အပြင် အခြေခံ စားသောက်ကုန် ဈေးနှုန်းတွေ ကြီးမြင့်တာကြောင့် အောက်ခြေ အဆင့်ဆင့်မှာ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ဖြစ်နေပြီး တပ်ပြေးတွေ များလာနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ တပ်မ ၇၇ အောက်ခြေ တပ်ရင်းတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲမှု အကြောင်း အပြည့်အစုံ တင်ပြချက်ကို နားဆင်ပါ။
သောကြာ, 08 ဇူလိုင် 2011
ဧရာဝတီ Friday, 08 July 2011 18:13 ဆောင်းပါး
ပုဂံ ဒေသခံတဦးကို လက်မှတ်ထိုးပေးနေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ - AP)
အဟန့်အတားကြားမှ လူထုက ဒေါ်စုကို ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်
မျိုးသန့် | သောကြာနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၀၈ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၂၂ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အာဏာပိုင်များက ကြိုတင်ဟန့်တားမှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပုဂံဘုရားဖူး ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေသခံလူထုများမှာ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်များ ရှိခဲ့ကြောင်း ခရီးစဉ် လုံခြုံရေးအတွက် လိုက်ပါသွားသူ NLD ပါတီလူငယ် ကိုအေးခိုင်က ပြောသည်။
နှုတ်ဆက်ခြင်းမပြုရန် အာဏာပိုင်များ အဟန့်အတားလုပ်ခဲ့သောကြောင့် ဒေသခံများအကြား စိုးရွံ့ခဲ့သော်လည်း စတုတ္ထနေ့မြောက် ခရီးစဉ်ဖြစ်သည့် ကြာသပတေး ညနေပိုင်းတွင် ညောင်ဦးဈေးသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်ခဲ့ရာ ကြောက်ရွံ့မှုမရှိ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။
“ပထမတော့ နည်းနည်းလန့်ကြတဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ၊ ဒေါ်စုလည်း လာမယ်ဆိုရော အောင်မလေး ဘယ်သူမှ မကြောက်ကြတော့ဘူးဗျ။ လက်ကလေး ကိုင်ရဖို့ကို အသက်စွန့်ရ စွန့်ရဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးလောက်အထိ ဖြစ်တယ်ဗျာ။ ကျနော်လည်း တော်တော်အံ့သြတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့ ကြုံရတာပါ။ လူထုက အဲဒီလောက်ထိ ချစ်တယ်ဗျာ” ဟု ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် NLD လူငယ် ကိုအေးခိုင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ညောင်ဦးဈေးသို့ သွားရောက်မည်ကို ဒေသခံ NLD အဖွဲ့ဝင်များ
ကြိုတင်သိရှိသွားရာ ပိတ်ထားသည့် ဆိုင်အချို့ပင်
ပြန်ဖွင့်ကာ ကြိုဆိုစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
သိုသိုသိပ်သိပ် သွားရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်ဖြစ်သဖြင့်
ဒေသခံများမှာ ခရီးစဉ် အသေးစိတ်ကို မသိရှိသောကြောင့် အစောပိုင်းရက်များက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်မှုများ နည်းပါးခြင်း
ဖြစ်သည်ဟု ခရီးစဉ်တလျှောက် လိုက်ပါသွားခဲ့သည့် သတင်းထောက်များက ပြောကြသည်။
ဈေးသူဈေးသားများမှ တဆင့် အနီးရပ်ကွက်များရှိ ဒေသခံ
များပါ သိရှိသွားပြီး စောင့်ဆိုင်း နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ လက်ဆောင်
ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ နှုတ်ဆက်လာသည့် လူထုမှာ ညောင်ဦးဈေးမြောက်ဘက်လမ်း တလမ်းလုံး အပြည့်ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည့် သတင်းထောက်များ၏ ခန့်မှန်းချက်အရ လူ ၃ ထောင်ကျော် ရှိသည်။
ကျော်ဖြတ်ကျော်ဖြတ် ကာယအိနြေ္ဒ အပျက်ခံပြီးတော့ကို တိုးကြတယ်ဗျာ။ အဲဒီလောက်ကို ဖြစ်တယ်ဗျာ။ ကျနော် လက်တွေ့ကြုံခဲ့တာ။ တချို့က ငိုတောင်ငိုတယ်။ ဒေါ်စုလာတဲ့အချိန်မှာ ဇွတ်ဖက်နမ်းတဲ့လူနဲ့ ငိုတဲ့လူနဲ့
ကျနော်တို့တောင် မျက်ရည်လည်တယ်” ဟု ကိုအေးခိုင်က ဆိုသည်။
ညောင်ဦးဈေးမှာ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သူများ အကြားက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓါတ်ပုံ မဇ္ဈိမ)
ပုဂံဘုရားဖူး ခရီးစဉ်တွင် ပုဂံမြို့ရှိ အာနန္နာဘုရား၊ သဗ္ဗုညုဘုရား၊ မြစေတီများသို့ ဘုရားဖူးထွက်ခဲ့ရာ ထိုဘုရားများရှိ ဂေါပက အဖွဲ့ဝင်များကလည်း ပန်းစည်း
ဒုတိယနေ့ ခရီးစဉ်တွင် ပုဂံမြို့ သရပါတံခါးအနီး၌
နိုင်ငံခြားသားများ အပါအဝင် ဒေသခံ ၂၀၀ ခန့်က
နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီး၊ အင်္ကျီများ၊ မှတ်စုစာအုပ်များတွင် အမှတ်တရ လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းခဲ့သည်။
ထိုနေ့ နေ့လည်စာကို သရပါတံခါးအနီးရှိ ဆိုင်အမည်
ရေးမထားသည့် လမ်းဘေးထမင်းဆိုင်၌ စားသုံးခဲ့သည်။ ဒေသခံများကတော့ ဆိုင်ကို သရပါသုံး ဟု ခေါ်ကြသည်။
ညနေပိုင်းတွင် သရပါတံခါးအနီး ဝါးတောကျောင်းတိုက်သို့ သွားရောက်ကာ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အား သင်္ကန်းကပ်လှူခဲ့ပြီး၊ ထိုကျောင်းတိုက်ရှိ ကိုရင် ၄ ပါးအား ထောက်ပံ့လှူဒါန်းရန် ပစ္စည်းလေးပါး ဒါယိကာမအဖြစ် ခံယူခဲ့သည်။
တတိယနေ့တွင် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် ပုပ္ပါးတောင်တက်လမ်းပေါ်ရှိ သစ်တောဦးစီးဌာနပိုင် သစ်တောပြတိုက်သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့သည်။
ခရီးစဉ် နောက်ဆုံးနေ့တွင် ညောင်ဦးမြို့နယ် ဇီးအိုသစ်လှရွာရှိ အင်ကြင်းတော သဘာဝ ထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ကာ ဇီးအိုသစ်လှရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သတင်းစာဆရာများက အကူအညီပေးရန် ပန်ကြားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် NLD အဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးနှင့် သောကြာ
မနက် ၈ နာရီခွဲတွင် အဲမန္တလေး လေကြောင်းလိုင်းဖြင့်
ညောင်ဦးမှ ထွက်ခွာလာရာ ၁ဝ နာရီ မိနစ် ၅ဝ တွင် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ရောက်လာခဲ့
ဘုရားဖူးမထွက်ခင်ကတည်းက ပြောထားသည့်အတိုင်း စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်မဟုတ်သဖြင့် ခရီးစဉ်တလျှောက် အနားယူခြင်း၊ ဘုရားဖူးခြင်းနှင့် ဒေသခံများ၏ စားဝတ်နေရေး အခြေအနေများကိုသာ လေ့လာခဲ့သည်။
ယခုခရီးစဉ် လုံခြုံရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံသူများအကြား စိုးရိမ်မှုများ ရှိခဲ့ပြီး၊ NLD က လုံခြုံရေးအတွက် အစိုးရတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိသားစု ဘုရားဖူးခရီးစဉ်အကြောင်း ပြည်တွင်း ပုံနှိပ်ဂျာနယ်များ၌ ဖော်ပြသည်ကို မတွေ့ရပါ။
Mr.Crusher & Ms.Quench ကာယဗလမောင် နှင့် ကာယအလှမယ် ...
ပုဂံဒေသ အင်ကြင်းတောရသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရေ...
Burmese President accepts credentials of Canadian ...
အနိုင်ရထိုင်းခေါင်းဆောင် မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စ ...